Polycarboxylate Superplasticizer / PCE Factory - China Polycarboxylate Superplasticizer / PCE abavelisi, abaxhasi
I-JS-103 sisizukulwana esitsha sokusebenza okuphezulu kwe-polycarboxylic acid superplasticizer eyayilungiselelwe ukusuka kwimethyl allyl yotywala i-polyoxyethylene ether macromonomer nge-polymerization yasimahla, iqulethe umxholo oqinileyo we-50%.
I-JS-104 yinkampani yethu yophando kunye neemveliso zophuhliso lwamva nje, kusetyenziswa i-polyether entsha yesithandathu yekhabhon monomer. Olu hlobo lwemveliso lunezinga eliphezulu lokuncitshiswa kwamanzi, elingaphezulu kwe-JS-103, kwaye linokukhusela ukusebenza okuphezulu kakhulu.
I-BT-302 i-Polycarboxylate superplasticizer 40% (uhlobo olulondolozayo oluphezulu)
I-BT-302 sisizukulwana esitsha sokukhupha ngokukhawuleza kunye nokugcina ukugcinwa kotywala kukamama okwenziwe kwi-TPEG ngokusetyenziswa kwepolymerization yasimahla, kwaye iqela elitsha lokukhululwa elizinzileyo laziswa kulungelelwaniso.
I-BT-303 Polycarboxylate Superplasticizer 40% (Uhlobo olugciniweyo lokukhululwa kancinci)
I-BT-303 sisizukulwane esitsha sokukhululwa kancinci kunye nokugcina isiselo esinxilisayo sokugcina isiselo esinxilisayo esenziwe kwi-TPEG ngokusetyenziswa kwepolymerization yasimahla, kwaye iqela elitsha lokukhululwa elizinzileyo laziswa kulungelelwaniso.
Esi sisizukulwana sesithathu sokusebenza okuphezulu kunye ne-eco-friendly poly carboxylic acid plasticizer, ephuhliswe yinkampani yethu ekujolise kuyo ngeplastizer. Umgubo kusetyenzwa phambili yokutshiza technology technology. I-powder particle iyunifomu ngobukhulu, ine-fluidity enhle, i-hydrophobicity ephantsi,